Ukubuyekezwa kwamahedfoni we-HolyHigh HV-368, umsindo nokuzimela ukuze ugcine | Izindaba zamagajethi
URafa Rodríguez Ballesteros | | Isithombe nomsindo, Izibuyekezo
Nakulokhu sibuya nokuhlaziywa kwama-headphone angenantambo. Kulesi senzakalo, ngesandla se-HolyHygh firm. Ikakhulu sikwazile ukuvivinya i- I-HolyHigh HV-368. Ihedsethi enobuchwepheshe True Wireless Umsindo Banikela ngokuncane kakhulu.
Amahedisethi ane konke okufunayo ngentengo engehlulwa, nokuthi manje ngenxa yokuphromotha okungaphezulu kokuthakazelisa bangaba ngabakho ngokuncane kakhulu. Lapha sikutshela konke mayelana ne-HV-368 evela eHolyHigh, ungaphuthelwa ukuhlaziywa kwethu.
1 Umsindo wekhwalithi ongafinyelelwa yiwo wonke umuntu
2 Idizayini enengqondo kodwa enhle
3 I-HolyHigh HV-368, ukumelana nobuchwepheshe obuphezulu
4 Idathasheet le-HolyHigh HV-368
5 Ubuhle nobubi bamahedfoni we-HolyHigh HV-368
Umsindo wekhwalithi ongafinyelelwa yiwo wonke umuntu
Siyabona ukuthi kunama-headphone amaningi emakethe. Futhi kubonakala sengathi ukwanda kwamamodeli amasha kanye nemikhiqizo kuzoqhubeka nokukhula. Namuhla sikukhombisa enye yezindlela esingakuthola sikwazi ukunikela ngekhwalithi yomsindo nempilo yebhethri ngentengo enhle.
IHolyHigh nemodeli yayo ye-HV-368 iyindlela eyodwa etholakalayo. Sikwazile ukuzizama izinsuku ezimbalwa bese sikutshela okwethu okuhlangenwe nakho nokuthi sathola ini. Futhi manje Ayikho imikhiqizo etholakele. Ngesaphulelo esingu-52%!
Idizayini enengqondo kodwa enhle
Ebhekene nokudilika okukhulu kwamamodeli namafemu ahlasela imakethe, abanye baye bafuna ukuzihlukanisa ngokwabo ngenxa yemiklamo ewubukhazikhazi noma imibala egqamile. Le yinto kwesinye isikhathi esebenza, kepha uma ingahambelani nokuhlangenwe nakho okuhle komsebenzisi ayikholisi.
I-Los Ukubheja kwe-HolyHigh HV-368 kudizayini yakudala nehlelekile. Ngaphandle kokuzijabulisa ngokuphathelene amafomu nemibala. Kepha ngaphezu kwakho konke, ugxile ekunikezeni umkhiqizo wokuthokozisa umculo lokho kwanelisa umsebenzisi ngekhwalithi yakhe. Futhi ukwakheka kwayo akuhehi ukunakwa, into ethandwa kakhulu nangaphezulu.
Ifomethi ye- i-earphone yangaphakathi kubonakala sengathi isungulwe njengezwe lomhlaba wonke. Noma kungesithi sonke esiluthanda lolu hlobo lwamahedisethi kakhulu, Ukunikezwa okubekwe kahle kunesipiliyoni sokulalela okungcono kakhulu kunenye. IHolyHigh HV-368 inikela ngale fomethi nge amathuba amathathu wosayizi ohlukile wamaphakethe ukuthola eyodwa esilingana kahle.
Amahedisethi athi yakhiwe ngepulasitiki esezingeni elifanele ngengxenye ekhanyayo iphume. Nepulasitiki enombala ofanayo kodwa enesiphetho esiqinile esiphikisana nendlebe. Ngaphandle siyathola izinkinobho zokulawula ukudlala esingazilungiselela njengoba sibona kufanelekile.
Ibhokisi lecala / ishaja lilandela umugqa osangulukile yomklamo wehedfoni. Unxande, umnyama ngombala futhi unezinto ezicwebezelayo ezixutshiwe neziphelile. Njengama-headphone, leli cala alikhanyisi, kepha lisajabulisa iso. Iwufeza ngokuphelele umsebenzi wayo futhi Inokungeziwe okuzokusiza ukuthi uqhubeke nokungeza.
Sithole eyodwa ukushaja okukhulu kwebhethri okungu-3.000 mAh ngakho-ke singayisebenzisa njengebhange lamandla. Sithola ohlangothini a okukhipha okujwayelekile kwe-USB lapho singakwazi khona ukuxhuma ikhebuli ukushaja noma yimaphi amadivayisi ethu. Eceleni kwakhe kukhona i- Isixhumi sohlobo C lwe-USB ukushaja ibhokisi uqobo.
Ngeke uthole ama-headphone emakethe ibhokisi lawo elikwazi ukunikela kuze kube izikhathi ezingama-30 ukukhokhiswa okugcwele. Ukubala lokho banikela ngamahora amane wokudlala okuqhubekayo ngemali egcwele. Kakade ngeke kudingeke ukhathazeke ngokuphelelwa yibhethri kude ekhaya
I-HolyHigh HV-368, ukumelana nobuchwepheshe obuphezulu
Uma sicabanga ngohlangothi lokuklama, kufanele sinake ukuthi lawa mahedfoni akwazi ukukunikeza ini. Futhi ukwazi ukuthi sithola ubuchwepheshe bamuva kubo kubalulekile lapho wenza isinqumo. IHolyHigh HV-368 inayo Ukuxhuma kwe-Bluetooth 5.0, ngakho-ke sine- ukuzinza kokuxhuma iphelele. Ngaphezu kwalokho, isixhumanisi esiya kwi-smartphone yethu siyazenzakalela lapho sibasusa ecaleni leshaja. Yikhiphe, shaya ukudlala futhi ujabulele umculo wakho ngaso sonke isikhathi.
Bala ezinye Izilawuli zomzimba kungenxa yabathile i- "pro" kanti abanye i- "against". Iqiniso ukuthi lezi zinkinobho zikhona okulungisekayo ngokuthanda kwethu, okungenzeki ngayo yonke. Futhi lapho singeke sibe nezinkinga uma kwenzeka ukujuluka noma umswakama ezandleni noma kudivayisi uqobo.
Okunye okungeziwe i-HolyHigh HV-368 enakho, nokwehlukanisa komunye umncintiswano, kufanele Ukuqinisekiswa kwe-IPX7. I Izinga eliphezulu lokuvimba amanzi ungathembela kulolu hlobo lwedivayisi. Ngakho-ke, ngeke izithukuthuku namanzi kube yinkinga ukuze sikwazi ukujabulela umculo wethu ngalawa mahedfoni. Uma uthanda ukudlala imidlalo ngomculo wakho ngevolumu ephelele, lawa kungaba amahedfoni owawufuna.
Idathasheet le-HolyHigh HV-368
Ifomethi yehedfoni endlebeni
Ukulawula ukudlala thinta
Finyelela kuze kufike kumamitha ayi-10
Ubuchwepheshe I-True Wireles Umsindo -TWS-
Bluetooth Inguqulo ye-5.0
Ukuzimela kufika emahoreni ama-4 wokudlala namahora angama-90 kokubekwe eceleni (kuya ngevolumu yokusetshenziswa)
Umagazini 3.000 mah
Isisindo sehedfoni 4.54 g
Ubukhulu X x 8.5 4.6 3 cm
Intengo 42.99 €
Ukuthenga Isixhumanisi Ayikho imikhiqizo etholakele.
Ubuhle nobubi bamahedfoni we-HolyHigh HV-368
Ngemuva kokuhlola lawa mahedfoni amasonto ambalwa sesifinyelele eziphethweni eziningana. Futhi njengayo yonke imikhiqizo esiyihlolayo ikhona njalo izinto esizithandayo, futhi ezinye ezingathuthukiswa. Kusuka kokuhlangenwe nakho kokuthola amadivayisi ahlolwe amafomethi ahlukahlukene namasiginesha ahlukahlukene, lapha sikushiya esikuthandayo kakhulu nokuthi yini esiyithande kakhulu ngalezi headphone ezingenantambo.
La amandla Yini eyenziwa ivolumu iyi-notch ngaphezu kwamanye amamodeli amaningi ahloliwe.
La ikhwalithi yomsindo Banikela ngokumangala kumzuzu wokuqala.
Unomthwalo wokulayisha we 3.000 mah baqinisekisa ukuzimela "okungenamkhawulo".
El sebenzisa njengebhange lamandla yecala layo leshaja kuyinto eyengeziwe ethokozisayo.
Ukushaja ku-3.000 mAh case
El ukwakheka okunesizotha kungabonakala kubudlabha.
Ishaja yebhethri ethi ikhava kuyenza isebenze kusinda kunokujwayelekile.
Umthamo womthwalo nawo uthonywe yi- usayizi webhokisi.
Intengo yakho, ngaphandle kwesaphulelo, iphakeme ngandlela-thile.
Ibhokisi elikhulu leshaja
Intengo ephezulu ngaphandle kwesaphulelo
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Izibuyekezo » Ukubuyekezwa kwehedfoni ye-HolyHigh HV-368
Umsindo unamandla. Kepha inokusikwa okuncane okucasulayo okwenza ingxoxo noma ukulalela umculo kungenzeki. Kwenzeka kuphela nge-galaxy s5. Ngizamile ukuyisetha kabusha, ukuqala kabusha ifoni, ukushintsha amabanga nokuma kwefoni. Akunakwenzeka. Akungenzeki kimi ngamanye amahedfoni.
Ingabe usebenzisa iCamScanner? Qaphela ngoba ingeza i-malware